Wararka Archives - Page 1406 of 1428 - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Page 1406
Amina Cali (Amina Sonna) - May 15, 2021
Qoraal ka soo baxay xafiiska Hanti Dhowrka Qaranka oo shaki badan abuuray? Ma madax...
Warqadda Hantidhowraha ka soo baxday ayaa waxaa la sheegayaa in aay soo diyaariyeen Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cawad iyo RW...
Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikarin Gabeyre aya hanti ka dhacay dad masaakiin ah oo ku nool duleedka Magaalada Muqadishu. Gabeyre oo ka mida...
Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qaraxyo Miino ah oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho. Sidda ay MOL u xaqiijiyeen goobjoogayaal Labo Qarax...
Ururka Al Shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo dagaal xooggan uu ku dhex-maray Gobolka Sh/hoose
Saacadihii la soo dhaafay ayaa deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose,waxaa dagaalo ku dhexmarayay Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya. Dagaalkaas oo qaatay saacado badan...
1...1,4051,4061,407...1,427Page 1,406 of 1,427